मिति(२०७५ फाल्गुन ७, मंगलवार) गृह पृष्‍ठ | प्रिन्टलाईन | सल्लाह सुझाव | पुराना अंक | सम्पर्क
एक पत्र समृद्धिलाई
प्रिय समृद्धि मुटुभरिको असिम माया तिमीलाई ¤
आराम छु भनेर म तिमीलाई ढाट्न चाहान्न । हरपल हरक्षण तिम्रै सम्झनामा यो मन छटपटिइरहेको बेला ‘म आराम छु’ भनेर तिमीलाई कसरी झुट बोल्न सक्छु र ? अहँ म पटक्कै सक्दिनँ । तिम्रो अभाव पलपलमा खड्किरहेको छ ।
प्रिय समृद्धि, तिमीलाई खोज्न म कहाँ पुगिन ? पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण चारै दिशा भौतारिइरहेँ ¤ विकट र दुर्गम पहाडी बस्तीहरूमा तिमी पुग्न सक्ने कुनै सम्भावना थिएन, किनकि तिम्रो वर्णन गर्नेहरूले तिमीलाई त्यहाँ लग्दैनन् भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । उनीहरूले तिमीलाई शहरी क्षेत्रमा कतै लुकाई छिपाई राखेका होलान् भन्ने मेरो अनुमान थियो । तर आज म यही निष्कर्षमा पुग्न बाध्य भएको छु– मेरो त्यो अनुमान पनि गलत रहेछ । देशकै राजधानी काठमाडौँका गल्लीगल्ली, चोकचोक सबैतिर तिमीलाई खोज्दै निकै दिनसम्म भौतारिइरहेँ । तर अहँ, तिमो नाकमुख कतै देख्न पाइएन । राजधानीका सडकहरू कतै जलमग्न त, कतै हिलाम्य थिए । थाहा छ, समृद्धि ! चावहिलभन्दा अलिमाथि जोरपाटी जाने बाटोमा त मान्छेहरू तिमीलाई गिल्याउँदै पानी जमेको बाटोमा बल्छी थापेर माछा मारेको अभिनय गर्दै थिए । यस्तै कतै सडकमै रोपाइँ त, कतै नारा जुलुस चल्दै थियो । सडकमा जताततै फोहरका डङ्गुर थुप्रिएका थिए । अहँ तिमी कतै थिइनौँ ।
समृद्धि, तिमीलाई थाहा छ ? तिम्रो र मेरो सहयात्राबाट देशलाई समाजवादसम्म पुर्‍याउने उद्घोष गरेका छन्– सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्नेहरूले ¤ उनीहरूकै गुलिया कुरा सुनेर त मैले तिमीलाई यसरी अगाध माया गर्न थालेको थिएँ । तिम्रो र हाम्रो वर्णन गरेर नै उनीहरू जनताको अभिमत लिई सिंहदरबार र बालुवाटार पुगेका थिए । तर आज बल्ल थाहा हुँदैछ– उनीहरूले त तिम्रो र मेरो नाम भोट बटुल्नलाई मात्र प्रयोग गरेका रहेछन् । तिमीलाई र मलाई जनताको घरघरमा पुर्‍याउने उद्घोष गरेका उनीहरूले तिमीलाई कहाँ छिपाएका छन् ? महिनौँदिन लगाएर खोज्दा पनि मैले कुनै पत्तो पाउन सकिना समृद्धि ¤ गाउँका झुप्राछाप्रामा त कुरै छोडौँ, शहर भनिएका स्थानहरूमा समेत तिम्रो कुनै सन्धगन्ध थिएन ।
समृद्धि, सिंहदरबार र बालुवाटारबाट चर्को स्वरमा तिम्रो र मेरो नाम फलाक्न अझै बन्द भएको छैन । ठिक यही बेला पत्रिकाका पानाहरू नौ वर्षे र १३ वर्षे बालिकाहरू बलात्कृत भएको र मारिएका समाचारले रङ्गिएका छन् । हत्या, हिंसा, लुट, अपहरण जताततै तिनै समाचार छ । तिम्रो र मेरो स्वरूपको कतै वर्णन छैन । मलाई शङ्का लाग्यो, कतै सिंहदरबार र बालुवाटारभित्रै तिमी अपहरणमा त परिनौँ ? त्यहीँभित्र बलात्कृत भएर न्याय खोज्दै कतै तिमी न्यायालयमा पो पुग्यौ कि ? यही सोचेर म तिमीलाई खोज्न न्यायालयतर्फ पनि हानिए । ओ हो ¤ त्यहाँको अवस्था झन विजोग थियो ¤ मुख्य न्यायमूर्तिको वासस्थाननै डुङ्डुङ्ती गन्हाइरहेको थियो । तिमी त्यहाँ पनि थिइनौँ ।
समृद्धि, जहाँ भएको भए पनि तिमीले थाहा पाएको हुनु पर्छ– तिमीलाई र मलाई चाँडै प्राप्त गर्न भन्दै देशमा करको बाढी बगाइएको छ । जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गापास, कृषि औजार खरिद, यातायातका साधनको खरिद, इन्टरनेट कहाँ गरिएको छैन करवृद्धि ? जताततै गरिएको छ– तिम्रो र मेरो नाममा । तर त्यसरी जम्मा गरिएको करलाई तिमी र ममाथि होइन, सिंहदरबार र सात–सात वटा भेडीगोठमा सेता हात्ती पाल्न खर्च गरिएको छ । समृद्धि, अब त मलाई विश्वास लाग्न पनि छोडिसक्यो, उनीहरूबाट हाम्रो साँच्चै संरक्षण हुनेछ । तिम्रो र मेरो नाम बेचेर उनीहरू त लुटमै मस्त देखिन्छन् । यस्ताको पनि के भर पर्नु है ¤
प्रिय समृद्धि, यो सत्य हो कि तिम्रो र मेरो सहयात्रा बिना देश समुन्नतिको युगमा प्रवेश गर्न सक्ने छैन । जसले तिमी–हामीलाई आफ्नो अभिभावक बताएका थिए, वास्तवमा उनीहरू हाम्रा रहेनछन् । हामी जसको भर पर्‍यौँ, उनीहरू वास्तवमा हाम्रा थिएनन् । जो वास्तवमा हामीलाई माया गर्ने अभिभावक हुन्, तिनलाई हामीले अझै चिन्न सकेका रहेनछौँ । प्रिय समृद्धि, आऊ अब हामीले आफ्ना सारथीहरू चिन्न विलम्ब नगरौँ ¤ तिम्रो र मेरो सहयात्रा देख्न आतुर छन् गाउँबस्ती र शहरहरू ¤ म नि निकै आतुर छु तिमीसँगको सहयात्रामा निस्कन । तसर्थ तिमी जहाँ जस्तो अवस्थामा, जस्तो बन्धनभित्र भए पनि ती सबै तोडेर आऊ, प्रिय समृद्धि तिमी छिट्टै आऊ ।
उही तिम्रै प्रतिक्षामा बाँचिरहेको तिम्रै प्रेमी– विकास